Gudoomiye Mursal oo ugafay Xildhibaanada- aan dooran isaga oo ku tilmaamay Soomaali diid!
Wednesday May 02, 2018 - 07:02:56 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Gudoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa arrin layaab leh ku soo qoray Barta uu ku leeyahay twitter taaso ah mid aan laga fileyn layaabna ku noqotay Xildhaano baddan iyo qeybaha bulshadda.
Maxamed Mursal oo laga sugaayay in u si isku mid ah oo cadaalada ugu adeego Xildhabaanada doortay iyo kuwii aan codkooda siin ayaa yiri ,Maanta waxay aheyd maalintii ay kala adkaadeen Soomaali doon iyo Soomaali diid.
Gudoomiyaha Cusub ayaa Xildhibaanada aan dooran oo gaaraya 120 Xildhibaan ku tilmaamay Soomaali diid taaso ah masuuliyad daro weyn in Xildhibaano codkooda siin waayay awood baddana ku dhex leh Golaha shacabka ku tilaamo Soomaali diid.
Gudoomiye Maxamed Mursal oo markii laga sugaayay in umahadceliyo doorashada kadib Xildhibaanada u mahad celiyay Farmaajo iyo Khayre, Waxaan u Mahad celinayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federal Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmajo & Ra'iisul Wasaare Xasan Cali kheyre Dadaalka ay ku bixiyeen Doorashada Xalaasha ah ee Maanta la iigu Doortey xilka Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayuu sidoo kale soo qoray gudoomiyaha Cusub.
Xildhibaanada Golaha shacabka ayaa loogu fadhiya in aay ka soo jawaabaan hadalka ka soo baxay Gudoomiyaha cusub oo durba bilaabay caga jugleyn.